के यो एयरपड्सaको वास्तविक भिडियो हो? होइन, तिनीहरू झूटा छन् म म्याकबाट हुँ
के यो एयरपड्सaको वास्तविक भिडियो हो? होइन तिनीहरू नक्कली छन्
यो केहि हप्ता वा बरु महिनौं भयो जुन हामी केहीको सम्भावित आगमनको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं नयाँ तेस्रो जेनेरेसन एयरपडहरू कि हामी यहाँ चारै तिर एयरपडहरू कल गर्दछौं। यस अर्थमा यो निश्चित छ कि एप्पलले चाँडै नै प्रख्यात र ठूलो हेडफोनको नयाँ पुस्ता सुरू गर्नेछ, तर हामीले यहाँ साझा गरेको भिडियोमा देखा पर्दैन।
र यो यो हो कि कुनै पनि बहाना भिडियो सुरूवात गर्न राम्रो छ जुन केहि नयाँ एप्पल हेडफोनहरू देखा पर्दछन् र निश्चित हुन्छ कि उनीहरू त्यो जस्तो हुनेछन्। धेरै पहिलेका रेन्डरहरू र धेरै चुहिनेहरूले सम्भव हेडफोनहरू देखाउँछन् र कोही सुरूवातको विचारको साथ आउँदछ उनीहरूको जाली संस्करण र तिनीहरू एप्पल हो भन्छन् ...
पहिले यसमा ट्वीट प्रयोगकर्ता डुआन रुईको खातामा जारी गरियो त्यहाँ अर्को पनि छ जसले यी नक्कली एयरपडहरू shows देखाउँदछ। तपाईं सिधा आफ्नो प्रोफाइलमा जान सक्नुहुन्छ र यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ।
एयरपड्स counter नक्कली उत्पादनहरू। pic.twitter.com/QGGtGti3pB
- DuanRui (@ duanrui1205) अप्रिल 8, 2021
मिing-ची कुओको कडाका विश्लेषकहरूले समेत केही हप्ता अघि चेतावनी दिएका थिए फारम कारक र डिजाइनको साथ यी नयाँ एयरपडहरूको आगमन एयरपड्स प्रोसँग वास्तवमै समान छ हालको तर अन्तिम पक्षमा सिलिकॉन रबर बिना भित्र र केही भिन्नताहरूको साथ। यसैले हामी यी कथित जाली एप्पल हेडफोनहरू अहिले देखिरहेका छौं।
यो सम्भव छ कि उनीहरूसँग यो डिजाइन हुनुपर्दछ वा यस खाताको भिडियोहरूमा हामीले देखेका जस्तो खालको छ ट्विटर को, तर हामी यो पुष्टि गर्न सक्छौं कि तिनीहरू एप्पलको मूल होइनन्। तथ्य यो हो कि जब मूलहरू जारी हुन्छन् हामीसँग चिनियाँ प्रतिलिपिहरू पनि हुन्छन्, जस्तो कि कपर्टिनोबाट सुरु गरिएका सबै उत्पादनहरू पनि छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » के यो एयरपड्सaको वास्तविक भिडियो हो? होइन तिनीहरू नक्कली छन्
म्याकोस बिग सुर ११..7 बिटा develop विकासकर्ताहरूको लागि
एप्पल वाचको लागि वाचस्मिथले प्रमुख अपडेट प्राप्त गर्दछ